UK kuti iongorore kuwanikwa kwaNvidia kweArm | Linux Vakapindwa muropa
UK kuti iongorore kuwanikwa kwaNvidia kweArm
Mwedzi yakati wandei yapfuura isu tinogovana pano pa blog nhau dzekutengwa kweARM naNvidia, sezvo makambani anga achingoita hurukuro nekutaurirana kwenguva yakati, sekutaura kweguhwa, munguva yakapfuura vaive zvakare neApple, pakati pevamwe vakaita saTSMC kana Foxconn, avo vangadai vakafarirawo kutenga.
Pakupedzisira, mukundi wekutenga aive NVIDIA, asi nyaya haina kumira ipapo, kubvira kutenga kwakadaro kunofanirwa kuve pasi pekutenderwa nezviremera zvakawanda vatongi kupota pasirese (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kubvunza iyo post mune inotevera chinongedzo).
UK kuongorora ARM kutenga
Iyo UK antitrust yekutarisa yakati ichaongorora kuwanikwa yakarongerwa madhora makumi mana emabhiriyoni naNvidia Corp. weBritish chip mugadziri ARM Ltd.
Nvidia ndiye anotungamira anogadzira desktop uye data centre magadziriso ekugadzirisa zvikamu.
Uye ARM, zvakare, inogadzira chip zvigadzirwa zvinotsigira mapurosesa mukati memazhinji emafoni epasirese uye mamwe akawanda emagetsi epasi-emagetsi. Arm's chip dhizaini zvinoshandiswa, pakati pevamwe, nemamwe makambani semiconductor anokwikwidza naNvidia.
Kuongorora antitrust kubva kuUK Makwikwi uye Market Authority ichatsvaga kuona kana chibvumirano ichi chiine njodzi kukuvadza vanokwikwidza.
Mukuferefeta uku kuti kuitwe zvinonzi pane matambudziko matatu anogona kuitika kunyanya kuti vakuru vanogona kuongorora.
"CMA ingango funga kuti, zvichitevera kuwanikwa, Arm ine chinokurudzira kubvisa, kukwidza mitengo, kana kudzikisira mhando yeIP [pfuma yavo] yekupa marezenisi kune vanokwikwidza veNVIDIA," chirevo ichi chakaverenga. .
Iyo CMA yakakoka vanofarira vechitatu mapato kuti vatumire kwavo zvirevo pamberi pekuferefetwa, kunozotanga kupera kwegore rino.
Iko kuferefeta hakusi kutarisirwa zvachose Tichifunga izvo, pamadhora makumi mana emabhiriyoni, kutengwa kwaNvidia kweArm chichava chimwe chezvinhu zvikuru zvehunyanzvi kuwanikwa.
Nyaya yekugona kuongororwa kwemutemo yakauya nguva pfupi mushure mekunge chiziviso chaziviswa. Panguva iyoyo, Nvidia akaita kuzvipira ku "enderera Arm's yakavhurika rezinesi modhi uye mutengi kusarerekera."
Iye anogadzira chipisi anorongawo kutora mamwe matanho izvo zvinogona kurerutsa zvinonetsa zvevatongi. Nvidia akati inotarisira kuita kuti huchenjeri huve seri kwekadhi kadhi rakajeka riwanikwe rezinesi kubva kunzvimbo yevatengi yeARM, inosanganisira makambani anokwikwidza.
"Mukuru weNvidia Executive" akataura neReuters akawedzera kuti kambani inoronga kuita matanho ekuchengetedza kuona kuti haikwanise kuwana ruzivo rwekuvanzika rwevatengi veArm kana kuwana mvumo yekukurumidza kuzvigadzirwa zvayo zvitsva.
Makambani akambopokana kuti kujoina mauto hakuzoderedze kukwikwidza nekuti vanoshanda mumisika dzakasiyana. Nvidia machipisi anonyanya kuwanikwa munzvimbo dzedata uye pamatafura, nepo maARM magadzirirwo ari kunyanya kushandiswa kuvaka mafoni uye "Internet yezvinhu" zvishandiso.
Nekudaro, kune zvimwe zvakaganhurirwa zvakapunzika: Nvidia inopa machina ekudzidza machipisi emota, chidimbu Arm iri kuisa pamberi zvakare. Kutenga ARM kwaizowedzera kusvika kwaNvidia kumatunhu akawanda emusika wechip umo parizvino isina hupo.
Chibvumirano chine zvimwe zvakafanana nekutora kwacho yeMellanox ye $ 6,9 bhiriyoni, ine musika wakanangwa, networking, inzvimbo zvakare iyo Nvidia yakanga isina huvepo hwakagadzwa pasati pachibvumirano.
Nvidia akavakira pane kuwanikwa nekuunza nyowani machipisi uye supercomputing zvigadzirwa zvinosanganisira Mellanox tekinoroji.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo unogona kutarisa chinongedzo chinotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » UK kuti iongorore kuwanikwa kwaNvidia kweArm
Chrome 87.0.4280.141 inogadzirisa 16 kukuvadzwa